9/11: Shan ka mid ah Al-Qaacidada ajaaniibta ah ee Soomaaliya ka dagaallamay - Bulsho News
9/11: Shan ka mid ah Al-Qaacidada ajaaniibta ah ee Soomaaliya ka dagaallamay
Dalka Mareykanka waxaa isbuucan laga xusayaa Sannad-guuradii 20-naad ee weeraradii 11-kii Sebtember ee sannadkii 2001-dii.
Rag ismiidaamiyey ayaa xoog kula wareegay diyaarado rakaab ahaa, waxayna diyaaradahaas ku dhufteen laba daarood oo dhaadheer oo New York ku yaallay, oo ahaa xarumihii ganacsiga Mareykanka.
Kumanaan qof ayaa ku dhintay. Weerarkaasi wuxuu ah kii ugu xumaa ee qarniyadaan dhaca, wuxuuna saameeyay Mareykanka iyo qeybaha kale ee caalamka.
Weeraradaas waxaa fuliyay ururka Al-Qaacidda oo xilligaas uu hoggaamiye u ahaa Osama Bin Laden oo markii dambe Mareykanku dilay.
Waxaa warbixintaan ku eegaynaa qaar ka mid ah xubnihii Al-Qaacidda ka tirsanaa ee ku dhuumanayay Soomaaliya.
Samantha Lewthwaite (Carmalada Cad)
Samantha Lewthwaite waa Haweeney u dhalatay dalka Britain, waxaana la sheegay inay madax u ahayd 200 oo haween ah oo ka tirsan Sirdoonka Al-shabaab, sida ay qoreen qara ka tirsan warbaahinta caalamka.
Lewthwaite, oo loo garanayo Carmalada Cad, ayaa ahayd haweeney garoob ah oo qayb ka ahayd weerarkii argagaxiso ee ka dhacay London ee loo yaqaanno 7/7, iyadoo xilligaasna ahayd xubin ka mid ah sirdoonka Al-shabaab.
Seygeedii ugu horreeyay, Germaine Lindsay, wuxuu 2005 isku qarxiyay tareen ka dhex shaqeeya London, wuxuuna dilay 52 qof, boqollaal kalena way ku dhaawacmeen.
Sidoo kale, waxaa la sheeegay in ay Carmalada cad ka dambeysay weerarro lagu dilay 400 oo qof oo ay ku jiraan 148 ruux oo lagu dilay weerarkii Al-shabaab ay ku qaadday Jaamacadda Gaarisa ee dalka Kenya, sannadkii 2015.
Waxay sidoo kale ay qayb ka ahayd weerarkii Westgate ee dalka Kenya ka dhacay sannadkii 2013-ki.
Samantha Lewthwaite ayaa haweenka Al-shabaab waxay ugu yeeraan “Hooyada Jihaadka”.
Dhowr weerar oo Al-shabaab ka fuliyeen Soomaaliya gaarahaanna Muqdisho ayaa la sheegay inay qayb ka ahayd abaabulkooda.
Samantha ayaa ka mid ahayd ajaanibta ka timid dibadda ee ku biirtay Al-shabaab.
Fazul Cabdullah Maxamed
Fazul Cabdullah Maxammed, oo ahaa hoggaamiyihii hore ee Al-Qaacidada ee Bariga Afrika, ayaa lagu tilmaamay eedeysanihii ugu weynaa ee lala xiriiriyay weerarradii Kenya iyo Tanzania ee lala eegtay safaaradaha Mareykanka.
Sannadkii 2011-kii ayaa lagu dilay is rasaaseyn ka dhacday bar-koontorool oo ku talla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Ka dib markii la dilay, wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Mareykanka, Hillary Clinton ayaa tiri: “Geerida Fazul waxay dhabar jab weyn ku tahay l-Qaacidda iyo howlaheeda Bariga Afrika.”
Ninkaas wuxuu ahaa shakhsi dhuumaaleysiga yaqaannay, wuxuuna ku hadli karay dhowr luuqadood.
Sida laga soo xigtay saraakiisha Soomaalida iyo Mareykanka, wuxuu lacago ku bixiyay in waxyaabaha qarxa la geeyo Soomaaliya, sidoo kalana wuxuu maalgalin jiray dhaqdhaqaaqyada waddanka lagu soo galinayay shakhsiyaad argagixiso ah oo laga keenay dalalka Afghanistan, Pakistan, Chechnya iyo xitaa Mareykanka.
Saalax Nabhaan oo la sheegay inuu ahaa hoggaamiyihii Al-Qaacidda ee dalka Soomaaliya ayaa isna lagu dilay weerar Maraykanka uu ku qaaday kolonyo gawaari ah oo marayay meel u dhow degamada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose.
Dhowr diyaaradood oo ah nooca qumaatiga u kaca (helicopters), ayaa qaaday weerarkaas oo la sheegay in ay ku dhinteen dhowr qof, wuxuuna bartilmaameedka ahaa Saalax Cali Saalax Nabhaan.
Saalax wuxuu bartilmaameed u ahaa FBI-da Mareykanka oo dhowr sano raadineysay. Waxaa sidoo kale loo heystay eedeymo ku saabsanaa weerarro ka dhacay dalka Kenya.
Abuu Mansuur Al-Amriki
Sannadkii 2013-kii ayaa lagu dilay Soomaaliya, Abu Mansuur Al Amriki ama Cumar Xammami, oo Mareykanka ahaa.
Wuxuu ku dhintay dagaal dhexmaray isaga iyo Al-Shabaab, garabkii Axmed Godane oo ka dhacay magaalada Baardheere ee Gobolka Gedo.
Waxaa jiro warar sheegaya in Abu Mansuur Al-Amriki ay la dhinteen rag kale oo ajaaniib ahaa, sida Osama Al-Britani oo asalkiisa uu Pakistan u dhashay iyo Khatab Al-Masri.
Dilka Al-Amriki ayaa xiligaas bannaanka soo dhigay khilaafaadka sii baahayay ee la xiriiray darajooyinka sar-sare ee al-Shabaab, oo xiriir la leh ururka Al-Qaacida.
Abu Mansuur Al-Amriki, intaaney dilin Al-Shabaabkii uu ka tirsanaa, waxay dowladda Mareykanka madaxiisa dul dhigtay lacag gaaraysay $5 milyan oo doolar – oo la siinayo cidii war ka keenta.
Cumar Xammaami wuxuu ka yimid gobalka ku yaalla koofur bari ee dalka Mareykanka ee lagu magacaabo Alabama.
Abuu Talxa Al-Sudaani
Abuu Talxa Al-Sudaani, waxaa kale oo lagu magacaabi jiray Taariq Abdallah, wuxuu ahaa sarkaal ka tirsanaa ururka Al-Qaacidda, waxaana la sheegaa inuu aad ugu dhawaa hoggaamiyihii Al-Qaacidda Osama Bin Laden.
Wuxuu ku dhashay dalka Suudaan, wuxuuna guursaday haween Soomaali ah intii uu ku noolaa dalka Soomaliya.
Wuxuu lahaa tababar heerkiisu sarreeyo oo la xiriiray dhanka samenta waxyaabaha qarxa.
Mareykanka ayaa muddo raadinayay oo ay bartilmaameed u ahaayen Isaga, Fazuul iyo Saalax Nabhaan.
Abuu Talxa Al-Sudaani ayaa la aaminsanyahay inuu qayb weyn ku lahaa weeraro ka dhacay geeska iyo bariga Afrika.
Sidoo kale, waxaa la aaminsan yahay in uu kaalin wayn ku lahaa dagaalkii ciidamada Itoobiya iyo maxkamadihii Islaamka ku dhexmaray deegaanka Iidaale ee gobolka Baay.
Sannadkii 2008 ayaa la sheegay in lagu dilay duqeymo ka dhacay Soomaaliya.
Wuxuu ka mid ahaa seddaxda qof oo maamulkii Bush ee mareykanka uu ku eedeeyay in ay abaabuleen weerraradii 1998 lagu qaaday safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzaaniya iyo weerarkii 2002 lagu qaaday hoteel ku yaalla Gobolka Xeebta ee Kenya.